ဤသည်မှာသင်၏ FACEBOOK ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟောင်းများကိုမိနစ်အတွင်းမည်သို့ဖျက်ပစ်မည်နည်း - သတင်း
ပို့သည့်အခါတစ်နှစ်ကိုးတွင်သတိရပါ Facebook တကယ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးပါပဲ၊ မင်းနဲ့သင့်အိမ်ထောင်ဖက်တွေဟာဆယ်ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အကဲဖြတ်ကြပြီး 'luff yew LOLZ!' နဲ့လက်မှတ်ထိုးကြမယ်။ ကမ္ဘာကြီးယေဘုယျအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာရုံဖြစ်ခဲ့သည် ငါတို့စောစောစီးစီးဆယ်ကျော်သက်များပြုခဲ့သည့်အလွန်ခက်ခဲသောအရာများအနက်တစ်ခု ။ ယခုမူကားသင်သည်ဤအချိန်ကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစား - ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ အဟောင်းကိုဘယ်လိုဖျက်ရမလဲ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပို့စ်များ - နှင့်အမြန်?!
သင်နောက်တစ်နှစ်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာသည့်ထိုကိုးနှစ်တွင်အရှက်ရမှုနှင့်စာသားအတိုင်းသင်မဖြေရှင်းနိုင်ပါကသင်၏ Facebook ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်များနှင့်အခြေအနေများကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းဖျက်ပစ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းသစ်နှင့်အမြန်လမ်းကိုနောက်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အစဉ်အမြဲ pls ငါ့ဘဝကနေဒီဖယ်ရှားလိုက်ပါ
သင်၏ Facebook ပို့စ်ဟောင်းများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်
၂။ Status box အောက်ရှိ 'Manage posts' ကိုနှိပ်ပါ။
၃။ ထိုတွင်သင်သည်တင်ပို့ချက်ကိုနေ့စွဲဖြင့်စစ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်သင်၏အချိန်ဇယားအစသို့ပြန်သွားနိုင်သည်။
၄။ နှစ်ကိုရွေးပါ၊ ပြီးနောက်ထိုအချိန်ကာလမှပို့စ်များအားလုံးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
၆။ Facebook ကသင့်အားပို့စ်များကိုဝှက်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်။
ရည်းစား tinder အပေါ်လျှင်ကြည့်ရှုဖို့ဘယ်လို
7. ပြီးတော့သင်ကစာသားပဲသူတို့ကိုပယ်ရှား, သူတို့သည်သွားပြီ !!
ဖမ်းမိသောအသေးစားသာလျှင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစာမူများကိုသာသင်ဖျက်နိုင်သည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများကသင်၏အချိန်ဇယားတွင်ထည့်ထားသောအရာများကိုစိတ်ရှုပ်စရာမဟုတ်ချေ။ သူတို့ကိုသင်သာဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်တယ်၊ သူတို့မှာအဲဒီမှာပို့စ်တွေရှိနေသေးတယ်၊
တစ်ချိန်တည်းတွင်စာမူ ၅၀ ကိုသာဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ဟာတစ်နေ့တာမှာအမှတ်တံဆိပ် cringe-poster ဖြစ်ခဲ့ရင် timeline မရှင်းလင်းခင်သင်ဟာမတူညီတဲ့သင်ခန်းစာအနည်းငယ်ကိုဖျက်ရလိမ့်မယ်။
• သင်၏ Facebook သူငယ်ချင်းတောင်းဆိုချက်များကိုမည်သူလျစ်လျူရှုထားကြောင်းယခုရှာတွေ့နိုင်ပါပြီ
• WhatsApp, Instagram နှင့် Facebook ပေါ်တွင် 'နောက်ဆုံးမြင်တွေ့ရသော' သည်မည်မျှတိကျကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စုံစမ်းခဲ့သည်
•ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကသင့်ရဲ့ 'အကြံပြုထားတဲ့သူငယ်ချင်းများ' ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်သလဲ။